देउवा सरकार यस्तो निर्णय गर्यो भाेली देखि फेरी लकडाउन? - Nepali in Australia
देउवा सरकार यस्तो निर्णय गर्यो भाेली देखि फेरी लकडाउन?
July 23, 2021 autherLeaveaComment on देउवा सरकार यस्तो निर्णय गर्यो भाेली देखि फेरी लकडाउन?
पछिल्लाे समय काेराेनाकाे मा’हामा’री दैनिक रुपमा बढिरहेकाे छ र काेराेनाले गर्दा धेरैले ज्या’न गु’माइसेका छन् भने अझै कयाेैँकाे ज्या’न जाे’खिममा रहेकाे छ ।काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले २०७८ को बैशाख १६ गतेदेखि लगाएको नि’षेधा’ज्ञा असारको दोश्रो साताबाट स्माट्र नि’षेधा’ज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ।
तर यो संगै सं’क्रमि’तको संख्या पनि बढ्दै जान थालेको छ । यो अवस्थामा अब काठमाडौमा जारी रहेको नि’षेधा’ज्ञा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै छ ।
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री दिया मिर्जा बिहेको पाँच महिनामै आमा बनेकी छिन् । उनले छोरा पाएकी हुन् । दियाले इन्स्टाग्राममार्फत यो जानकारी दिएकी हुन् । दियालाई सामाजिक संजालमा बधाईको ओइरो लागेको छ । छोराको नाम अव्इान आजाद रेखी राखिएको छ । समयभन्दा पहिले नै जन्म भएकाले कयौं नर्स र चिकित्सकले नवजात आईसीयूमा शिशूको उपचार भइरहेको छ ।
उनलाई गर्भवती भएका बेलामा अचानक ए’पेन्डे’क्टोमी भएको थियो । पछि गम्भीर ब्या’क्टेरि’यल इ’न्फेक्सन भएपछि खतरा हुने देखेर समयअघि नै शल्यक्रिया गरी बच्चालाई निकालिएको हो । दियाले छिट्टै उनको छोरो घर जाने पनि लेखेकी छिन् ।
दिया र उनका पति वैभव रेखीबीच सन् २०२१ को फेब्रुअरी १५ मा बिहे भएको थियो । दियाका यो दोस्रो बिहे हो । बिहेका समयमा उनी गर्भवती थिइन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
लामोदुरिका सवारीसाधन चलाउने तयारि
Breaking news आज बाट उपत्यकामा १० दिन निषेधाज्ञा थपियो- नारा-जुलुस गर्न नपाइने लगायत यस्तो पनि पढ्नुहोस्
काठमाडौं उपत्यकामा फेरि निषेधाज्ञा थपियो, अब यी क्षेत्रहरु खुल्ला !